Faroole oo weerar ku qaaday Wasiir Xoosh Jabriil +COD | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Faroole oo weerar ku qaaday Wasiir Xoosh Jabriil +COD
Senator Cabdiraxmaan Faroole oo ka mid ah Aqalka Sare ee Baarlamanka Somalia, ayaa si faah faahsan uga hadlay dastuurka dalka Soomaaliya, wuxuuna weerar ba’an ku qaaday wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jabriil oo maalmahan ku sugnaa Garoowe.
Faroole, oo la hadlay Radio Garowe ayaa Wasiir Xoosh ku eedeeyay inuu marin habaabiyay Dastuurka Somalia iyo saxiixayaashiisa, taasna ay tahay nasiib darro iyo been abuur loo gudbinayo shacabka.
Qodobka ku aadan wax ka badalka Dastuurka oo Wasiir Xoosh tilmaamay inaan waxba laga farogalin ayuu Faroole ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin isagoo xusay in qodobo badan faraha la galiyay oo sidii loo saxiixay qaab ka badalan loo gudbiyay, taasoo uu xusay inay ka sameeyeen qoraalo tiro badan.
“Waxaan idiin sheegayaa Aflagaadada uu sameeyay Cabdiraxaam Jibriil oo uu leeyahay Conspiracy theory, ama ahayd Been abuur, waa aflagaado iyo Madaxgoosasho iyo wax sharci la isku gayn karo, waana qalad inuu saas yiraahdo iyo dambi loona masaabixi maayo,” Ayuu yiri Cabdiraxmaan Farole oo ku sugan Waddanka Australia. Faroole, ayaa Xoosh sidoo kale ku eedeeyay inuu marooqsaday shaqadii Baarlamanka Somalia oo uu xuusay inay Guddiyo u xil saareen arrinta Dib u eegista Dastuurka Somalia islamarkaana dhawaan dooran doonaan Guddoomiye.